Cake creamsicle Cake (laga bilaabo xoq) - Nacnac
Cake creamsicle Cake
Cake My Ore creamsicle Cake Sida Xagaaga oo kale
Keeggan kareemka kareemka liinta ah wuxuu u dhadhamiyaa sida daaweynta jalaatada macaan ee aan ku raaxeysan jiray markii aan yaraa. Sirta ayaa u adeegsanaysa isku-uruurinta liinta dhabta ah iyo ganache shukulaatada cad cad dhaxanta! Kareemka la kariyey wuxuu kaloo noqon karaa mid dhadhan fiican leh!
Aabbahay wuxuu soo iibsan jiray boorso aad u weyn oo ah waxyaabaha lagu dubo kareemka jalaatada ee ku jira koobabkaas balaastik yar oo leh malqacado yaryar oo alwaax ah oo uu cuno. Dhamaadka xagaaga kuwa ugu dambeeya ee had iyo jeer qaboojiye yar uu gubto laakiin taasi nagama hor istaagin inaan si dhuumaaleysi ah u galno maalmaha runtii kulul.
maxay kubbadda masduulaagu caan u tahay
Markii mid ka mid ah aroosadeyda ay weydiisteen dhadhan kareem kareem ah oo loogu talagalay keega sanad guuradeeda waxaan si qarsoodi ah ugu faraxsanahay tijaabinta! Waan jeclahay isku darka dhadhanka macaan ee liinta oo lagu daray ganache shukulaatada cad cad ee shiidan.
Cake creamsicle Cake Ka xoq
Keeggan kareemka kareemka ah ayaa laga sameeyay xoq! Looma baahna sanduuq isku dhafan ama baakado jell-o loo baahan yahay. Sirta ku jirta qoraalkan cajiibka ahi waa burka keegga laakiin keeggan ayaa wada hela dhammaan dhadhanka liinta ee liin dhanaanta dhabta ah.
Aad ayey muhiim u tahay inaad u isticmaasho nooca saxda ah ee bur ah qashinkan. Xaqiiqdii waan la ciyaaray habeyn daqiiqda AP ah oo aan anigu aad u fiicnaan lahaa laakiin muuqaalku u eg yahay rootiga hadhuudhka liinta. Ma wanaagsan.
Waxa kale ee aad u baahan tahay waa waxyaabaha qaar oo u dhadhamiya sida liinta (obvi). Waxaan u isticmaali doonnaa xoogaa casiir liin dhanaan ah oo ka soo baxa gasac, liin dhanaan iyo soo saar liin dhanaan ah. Waxaan sidoo kale u isticmaalaa wax yar TINY aashito (ikhtiyaar ah) si kor loogu qaado qaniinyadaas keegga.
Sida Loo Sameeyo Cake creamsicle Cake
Si aad u sameysid keega kareemada waxaad u baahan tahay xoogaa casiir liin dhanaan ah (badiyaa qaybta macmacaanka la qaboojiyey), hal liin macaan, liin dhanaan ah iyo bur keeg. Waxay kuxirantahay deegaankaaga waxaad ubaahantahay inaad xoogaa ugaarsi ku sameysid maaddooyinkan laakiin badankood waxaa laga heli karaa dukaanka raashinka.
Keegani wuxuu adeegsadaa habka isku-darka gadaal si aad iskugu darsato bur, sonkor, budada dubista, aashitada iyo milixda ku jirta baaquli qasiyaha. Kadib waxaad ku dari doontaa qolkaaga subagga heerkulka oo u oggolow inuu ku qasmo lifaaqa daboolka illaa isku darku u eg yahay ciid aan dhab ahayn.
Intaas oo iskudareyso isku dar caanahaaga, saliidaada, waxyaalaha aad soosaartay, ururada liinta, ukunta iyo xaydha. Hubso in ukuntaada, caanahaaga iyo isku-uruurintu ay dhammaantood yihiin QOLKA JOOGTADA (waa ka xumahay qaylada laakiin runtii waa muhiim lol).
ma jiri doontaa maalin kale oo gobanimo doon ah
Ku dar qiyaastii 1/3 ee dareerahaaga isku dar ah maaddooyinka qallalan kuna dar dhexdhexaad dhexdhexaad ah hal daqiiqo oo buuxa. Ha walwelin, isku badin maysid laakiin haddii aad daqiiqad isku dari weydo markaa waxaad ku dambayn doontaa rooti hadhuudh ah oo burbursan ee ha ka welwelin! Ha la isku daro!
Halkani waa halka aan sidoo kale ku daro dhibic huruud ah iyo dhibic liin dhanaanta cuntada midabaynta si aan u soo saaro midabka sherbet liinta ah ee quruxda badan ee i xasuusiya jalaatada laakiin gebi ahaanba waad ka tagi kartaa dabiici ahaan waxaadna yeelan kartaa keeg midabkiisu midabkiisu yahay midab casaan ah.
Ku dar wax yar oo ka mid ah dareerayaasha ka dibna xoq maddiibadda si wax walbana ay si siman isugu dhafan yihiin. Ka dibna ku dar inta hartay ee dareeraha ah illaa inta la isku darayo. Ka dib marka la isku daro, waxaan ku duxaa digsiyadeyda qaar ka mid ah keega oo waxaan ku dubaa foornada 335 ℉ illaa 30-40 daqiiqo illaa burushka cadaygu ay nadiif uga soo baxayaan.
Orange Creamsicle Qaboojinta
Waxaan dareemayaa inay jiraan waxyaabo badan oo aad ku lammaanayn karto keeggan kareemka liinta leh. Waad u raaci kartaa buttercream fudud oo fudud oo ah keeg is dul saaran ama keega arooska. Kareemka la kariyay ee loogu talagalay daaweynta hal heer oo fudud qoyskaaga iyo asxaabtaada. Ama ganache shukulaatada cad oo aniga ii leh dhadhanka vanilj ee ugu habboon ee lagu daro dhadhanka liinta.
Ganacsadeyda shukulaatada cad waxaan u isticmaalaa saaxiibkey Cake Waxaa Qortay Cynthia White 'Cunnooyinka' kaas oo ah saamiga 3.7 ilaa 1. Aad bay u saxsan tahay lol. Anigu ma ihi SIDAN oo waxaan ula baxay saamiga 3: 1 oo macnaheedu yahay seddexdii rodol ee shukulaatada ah waxaan isticmaalay 1 lb oo kareem culus. Hadaad rabto ganache adag waxaad isticmaali kartaa 4: 1. Anigu iskuma tijaabin karintani aniga oo isticmaalaya nacnac dhalaalaya laakiin waan ogahay in biyahayga ganache ee faleebada ahi uu adeegsado saamiga 6: 1 oo uu si adag u baraf dhigo
Cake creamsicle Cake Oo leh Soda Liinta
Waad sameyn kartaa nooc fudud oo keeggan ah adoo isticmaalaya sanduuqa cad ee isku darka keegga ah iyo cabbitaanka liinta sida liinta ama fanta liinta. Isku dar isku darkaaga, ukunta iyo saliida 2 koob oo soodhada liinta ah. Dubo sida laguu faray oo ku kari kareemka aad u kartirsan tahay!
meesha ugu fiican ee laga iibsado wejiga waqooyi
Cake creamsicle Cake Iyadoo Jell-O
Dadka qaarkiis runtii waxay jecel yihiin dhadhanka keega kareemka iyagoo isticmaalaya ku darista jallaato oranji-o. Nidaamku wuxuu u eg yahay keegga soodhaha leh waxaana badanaa loo yaqaan keeg kareemka kareemka liinta. Waxaad u baahan doontaa hal sanduuq oo ah keeg isku dhafan oo liin dhanaan ah iyo 3 wiqiyadood oo ah orange jell-o. Isku qas sanduuqaaga ku qas ukunta, caanaha iwm ee ay u yeerto oo u dubo sida lagu faray. Isku dar jell-ogaaga 1 koob oo biyo kulul iyo 1 koob oo biyo qabow. U oggolow inaad qaboojiso qolka qolka. Godad ku duub keegaaga dubay kuna shub isku darka jell-o dusha. Qaboojiyaha 2-3 saacadood.
Ku dhaji keega kareemka la kariyey! Daaweyn xagaaga oo fudud oo dhadhan fiican leh.
Waxaad jeclaan doontaa keeggan! U fiirso sida aan ugu sameeyay keegga kareemada kareemka ee casharkeyga fiidiyowga ah.
Ma jeclaan laheyd cuntadan? Hubso inaad hubiso kuweenna Liiska Cake Liinta iyo kaayaga Shukulaatada Shukulaatada Caddaan!
Keeg kareem kareem ah oo kugu celin doona caruurnimadaadii. Ganacsi shukulaato cadaan ah oo riyo riyo ah oo riyo riyoodo ah oo sifiican uguxiran keeggan liinta jilicsan ee laga sameeyay maaddooyinka xoqan. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:751kcal
▢10 oz (284 g) bur keeg
▢10 oz (284 g) sonkorta granluted
▢1 1/2 tsp (1 1/2 tsp) budada dubista
▢1/4 tsp (1/4 tsp) aashito (ikhtiyaar)
▢6 oz (170 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢7 oz (198 g) liin dhanaanta diirada dhalaalay heerkulka qolka
▢4 oz (113 g) caano heerkulka qolka
▢4 weyn (4 weyn) ukunta
▢laba tsp (laba tsp) liin dhanaan
▢zest 1 (zest 1) liin dhanaan
▢laba oz (57 g) saliidda cuntada
▢1-2 dhibco (1-2 dhibco) midabaynta cuntada jaalaha ah
▢1 hoos u dhac (1 hoos u dhac) midabaynta cuntada liinta
Shukulaatada Shukulaatada Caddaan
▢24 oz (680 g) Shukulaatada cad
▢8 oz (227 g) kareemka karbaashka culus
Hubso in dhammaan maaddooyinkaagu ay yihiin heerkulka qolka (caanaha, ukunta, casiirka liinta, subagga). Kuleyli foornadaada ilaa 335 ℉
Weelka baaqigaaga wax ku qaso, isku dar bur, sonkor, cusbo, budada dubista iyo soodhaha. Afuuf oo dhinac iska dhig.
Weel gaar ah, ku dar caanahaaga, casiirka liinta, saliidda iyo ukunta, soo-saarka iyo zest. Jeeg isku dar.
Ku dar subagga heerkulka qolka burkaaga isku dar kuna lifaaq lifaaqa daboolkaaga. Isku qas si hoose illaa isku darku u eg yahay ciid aan dhab ahayn.
Ku dar 1/3 ee walxahaaga qoyan isku dar. Mashiinkaaga u rogo mid dhexdhexaad ah iskuna qas hal daqiiqo oo buuxa. Isku-dhafka ayaa u muuqan doona midab khafiif ah oo u muuqda mid kafiican. Ha yareyn waqtiga ama qaabka keegaaga uma horumarin doono wuuna burburayaa. Weelkaaga ku xoq spatula si aad u hubiso in baydhku uu si buuxda isugu dhex dhacayo xagga hoose.
Ku dar dhibcahaaga midabka cuntada, aaladda citrica ka dibna ku dar 1/2 dareerahaaga hadhay. Ha ku darno hooseeya ka dibna ku dar inta hartay ee dareeraha ah. Isku qas ilaa inta la isku darayo.
Ku shub baytari digsiyada la diyaariyey (Waxaan jeclahay inaan isticmaalo googaha keega) oo dubi ilaa 30-40 daqiiqo ilaa cadayga si nadiif ah uga soo baxayo. Ku duub oo ku kariyo keega ku duub balaastik ka hor intaadan wax ciqaabin oo buuxin.
Tilmaamaha Ganache Chocolate Chocolate
Shukulaatada microwave ee ku jirta weelka nabdoon ee microwave 1 daqiiqo si aad u jilciso.Keen kareem culus oo karbaash ah isku kari ilaa ka dibna ku shub shukulaatada Hubso in shukulaatada si buuxda loo daboolay U daa ilaa 5 daqiiqo Si tartiib ah u laaq si aad isugu darto kareem iyo shukulaato, ha ku darin hawo Ku shub digsi gacmeed ama saxan si ay ugu adkaato inay isku ekaato buttercream. Ka dib walaaq ilaa kareemka ka hor intaadan dubin keegaaga. Haddii ganache aad u adag yahay, microwave 10 sekan si aad u jilciso ka dibna walaaq ilaa ganache ay tahay joogteynta la doonayo.
U adeegida:1g|Kalori:751kcal(38%)|Kaarboohaydraytyada:95g(32%)|Protein:kow iyo tobang(22%)|Dufan:37g(57%)|Dufan Dufan:2. 3g(115%)|Kalastarol:186mg(62%)|Sodium:465mg(19%)|Kaliumperyamper:474mg(14%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:60g(67%)|Vitamin A:1045IU(kow iyo labaatan%)|Vitamin C:45.6mg(55%)|Kaalshiyam:119mg(12%)|Bir:1.2mg(7%)
maxaa ku soo dhacaya netflix Abriil 2019
sida loo xiro kuwa ciidanka cirka
kareemka karbaash adag ee barafaynta qurxinta
sababta uusan smith u noqon doonin maalinta xornimada 2